Xisaabaadka Bangiga ugu Fiican Dhallinyarada Xiisaha Badan | 2022
Bogga ugu weyn Xisaabaadka Bangiga ugu Fiican Dhallinyarada Xiisaha Badan | 2022
Waxaa jira sababo badan oo lagu furayo akoon bangi, gaar ahaan qof weyn. Marka la soo koobo, dad badan ayaa ku weydiin doona sababta qof weyn uusan mid u lahayn. Dareenkaas oo kale ayaa hoos ugu sii fidaya kurayda.
Maalinba maalinta ka dambaysa, baahida ay carruurtu u qabaan koontooyin bangi ayaa sii kordhaysa, sababtuna waa inay sidaas sameeyaan.
Markaad dooranayso koonto bangi oo loogu talagalay carruurtaada, waxaa ugu wanaagsan inaadan qiyaasin laakiin inaad u hesho xisaabaadka bangiga ugu fiican dhallinta hadda la heli karo oo sugan.
Maqaalkani wuxuu ka hadlayaa xisaabaadka bangiga ugu fiican ee dhalinyarada iyo sida ay u shaqeeyaan.
Waa maxay xisaabaadka bangigu?
Xisaabaadka bangigu waa habayn dhexmarta dadka iyo hay'adaha maaliyadeed. Qabanqaabadani waxay u oggolaanaysaa inay bangiga lacag ku haystaan ​​ama lacag ka soo ururiyaan.
Waxaa jira noocyo badan oo ah habaynta xisaabaadka bangiyada oo bangiyadu la leeyihiin macaamiishooda. Waxaa jira koontooyin hubin, koonto kayd, koontooyin wadajir ah, xisaabaadka hadda jira, iwm.
Qaarkood waxay adeegsadaan xisaabaadka bangiga qarsadaan lacagtooda.
Maxay danta muhiim u ahayd qarniyo badan?
Investopedia ayaa tan ku sharraxaysa “Heerarka dulsaarka ayaa wax badan ka taraya go’aaminta joometeriga dhaqaalaha, oo macnaheedu yahay qaybinta dhabta ah ee shaqada iyo ilaha.
Waxay muhiim u tahay warshadaha koraan iyo warshadaha hoos u dhaca, iyo meesha dadku u dirayaan raasamaal maaliyadeed iyo mid jidheed. Heerarka dulsaarka ayaa hago inta badan dhaqdhaqaaqaas. Dulsaarku wuxuu u adeegaa dhowr hawlood oo muhiim u ah dhaqaalaha suuqa.
Waxa ugu cad waa isku -duwaha u dhexeeya keydiyaha iyo amaahda. Kaydiyayaashu waxay bixiyaan dulsaar ah inay dib u dhigaan isticmaalkooda illaa taariikhda mustaqbalka, halka kuwa wax amaahiya ay tahay inay bixiyaan dulsaar si ay wax badan u cunaan hadda. ”
Sidee bay muhiim u tahay dulsaarka sare?
Dulsaarka dulsaarka ayaa saameeya qof walba si uu u dhibo qof walba. Dadku waxay u baahan yihiin dulsaar sare maxaa yeelay waxay inta badan dabooshaa sicir barar kasta oo dhaqaale oo dalka ku dhici kara.
Mid ka mid ah rafcaanka xisaabaadka kaydka ee wax-soo-saarka badani waa in kaydiyayaashu aysan lumin doonin sicir-bararka kaydkooda degdegga ah.
Dhalinyaradu ma u baahan yihiin xisaab bangi?
Koontada bangiga ee dhallinta ayaa laga yaabaa inay siiso wax ay ugu faanaan saaxiibbadood laakiin waxay kaloo ku siinaysaa xoogaa xasillooni xagga maskaxda ah maxaa yeelay waxay baranayaan cashar nololeed oo aad u qiimo badan kaasoo ah mas'uuliyad maaliyadeed iyo sida loo maareeyo lacagta.
Hubsiimo la’aantu marka ay jirto da’yarta ayaa ah waxa kallifaya dhallinyaro badan inay ka fogaadaan dhaqaalaha oo ay is -hagaajiyaan.
Tirakoobyadu waxay sheeganayaan in 58% kaliya kuwa dhawaan-qalin-jabiyay kulliyadda ay sheegeen inay haystaan ​​kaarka deynta, sida laga soo xigtay Sahankii Qalinjebinta Kulliyadda Experian ee dhowaan.
Xisaabaadka bangiga ugu fiican ee dhalinyarada leh dulsaar sare
#1 - Koontada jeegga dhalinta ee Capital One money
Capital One wuxuu leeyahay qorshe loogu talogalay dhallinta la yiraahdo lacag -hubinta dhalinta. Koontada jeegga dhallintu ma aha oo kaliya dhallinta laakiin waxaa loogu talagalay carruurta, dhallinta, iyo dhallinta, inta ay ka weyn yihiin 8 jir.
XIDHIIDHKA: 20 Blogyada Maalgashiga Ugu Fiican Sanadka 2022
Waalidiinta ayaa sidoo kale loo oggol yahay inay koontada iska eegaan oo ay korka ka joogaan kharashaadka ilmahooda oo ay ka faa'iidaystaan ​​daqiiqadaha lacagta la baran karo.
Koontadan oo loogu magac daray GOBanking ayaa xisaabta ugu fiican ee hubinta sanadka 2022 waxay la socotaa kaarka deynta oo lacag la’aan ah oo ay dhalinyaradu u isticmaali karaan inay ku helaan lacagtooda in ka badan 40,000 oo ATM oo ku baahsan Mareykanka.
Koontada jeegga dhalinta ee Capital One Money wax lacag ah lagama qaado mana laha ugu yaraan. Heerka dulsaarka ee koontada dhallinta waa 0.1000% oo leh Dakhliga Boqolleyda Sannadlaha ah ee 0.10%.
Heerarka dulsaarka iyo waxsoosaarka boqolleyda sanadlaha ah waa kala duwan yihiin waxaana laga yaabaa inay isbaddalaan mar kasta oo ikhtiyaarka bangigu yahay. Dulsaarka koontada dhallinta ayaa la isku daraa oo la xisaabiyaa bil kasta.
Siyaasadda Capital One ee koontada dhallinta waxaa ku qoran “dhammaan noocyada kala duwan ee dhigaalka aan lacagta ahayn, dulsaarku wuxuu bilaaban doonaa inuu soo xaroodo ugu dambayn maalinta shaqada ee xigta maalinta bangiga ee lacagta lagu shubay.
Lacag -dhigashada lacagta caddaanka ah, dulsaarku wuxuu bilaabi doonaa inuu ururiyo isla maalinta lacagta la dhigay.
#2 - Xisaabta hoose ee Bangiga
Citybank wuxuu leeyahay qorshe loogu talagalay dhalinyarada ka weyn 15 sano. Tan waxaa la filayaa inay ku siiso waayo -aragnimo xagga bangiyada ah. Koontadani waxay la socotaa kaarka deynta si loo yareeyo bixinta jeebka lacag caddaan ah.
Kaarkaas amaahda ah waxaa loo isticmaali karaa in lagu dhiso waayo -aragnimo waxbaris caafimaad leh oo ku saabsan waxbarashada maaliyadeed ee dhallinta goor hore waxayna ka caawin kartaa inay abuuraan taariikh deyn oo wanaagsan goor hore markay dhallintu korayso.
Khubarada maaliyadeed waxay rumeysan yihiin in “kaarka amaahdu uu noqon karo aalad weyn oo carruurta lagu baro lacag, badiyaa maxaa yeelay baridda ilmahaaga sida si masuuliyad leh loo isticmaalo kaarka deynta inta badan waxay horseedaa dhammaan noocyada kala duwan ee wada sheekaysiga lacagta ee ku saabsan miisaaniyadda, ka fogaanshaha deynta, iyo qorsheynta yoolalka waaweyn . ”
#3 - Koontada dhallinta ee Wells Fargo
Koontada Hubinta Dhalinta ee Wells Fargo & Shirkadda (WFC) waxay u baahan tahay $ 25 deebaaji bilow ah mana la imaan wax kharash dayactir ah.
Waalidiinta, ogeysiisyada ku saabsan macaamilka waxaa lagu soo diri karaa qoraal ahaan ama emayl, waxaana la dejin karaa xadka kharashaadka kaarka bangiga iyo ka bixitaanka koontada.
Dhallinyaradu waxay ka faa'iidaysan karaan qalabka maaraynta lacagta ee laga heli karo koontada. Bangigu wuxuu bixiyaa marin -u -helidda moobiilka si joogto ah ula -socodka bangiyada iyo la -socodka khiyaanada.
#4 - koontada galitaanka dhallinta ee bangiga Union
Bangiga Union wuxuu kaloo bixiyaa koonto jeeg ah Teen Access oo loogu talagalay dhalinyarada da'doodu u dhaxayso 13 ilaa 17. Koontadan, oo u baahan milkiile wadajir ah oo qaangaar ah, waxay ka caawisaa dhallinta inay bartaan mas'uuliyadda maaliyadeed.
XIDHIIDHKA: 10 Maalgashiyada Waqtiga Gaaban ee Ugu Fiican
Markuu dhallintaadu gaarto 18, koontadiisa Helitaanka Dhallinta waxay si otomaatig ah ugu beddeshaa koontada jeegga Naqshadeynta ee Bangiga.
Iyada oo la sugayo marka koontada dhallintu noqoto mid bangi ku jirta koontada naqshadeynta, koontada dhallinta ugu yar waa $ 1 iyo adeegga adeegga billaha ah ee $ 0.
Koontadan dhallintu waxay la timaadaa kaadhka ATM oo leh $ 100 maalin kasta xadididda bixitaanka iyo la -socodka akoonka internetka habeen iyo maalinba, dulsaarkuna wuu sii kordhaa maalin kasta waxaana la bixiyaa saddexdii biloodba mar.
Koontadan dhallintu waxay u baahan tahay milkiilaha koontada wadajirka ee dadka waaweyn.
#5 - Xisaabta ardayga ee Bangiga Muwaadinka
Furitaanka a koontada ardayga ee Bangiga Citizen, oo hoosaad ka ah Maaliyadda Muwaadinka (CFG), ayaa ku imaanaysa iyada oo aan wax lacag ah laga qaadin bil kasta illaa da'da 25.
Waxa kale oo ay bixisaa waayo -aragnimo koonto oo la mid ah xisaabaadka hubinta wadajirka ah ee helitaanka internetka iyo bangiyada guurguura.
Faa'iidada ay leedahay dhallinta ayaa ah, marka koontada keydintu ay ku xirnaato koontada jeegga, bangigu wuxuu bixiyaa qalab dheeri ah oo gacan ka geysanaya dejinta yoolalka iyo dabagalka kaydinta ee iibsiga baabuur, safar, ama kulliyad.
Khidmadda Dayactirka Billaha ah ee koontadan waa laga dhaafi doonaa haddii ugu yaraan 1 deebaaji lagu dhejiyo koontadaada kahor dhammaadka muddada warbixintaada.
Si aad u hesho muddada bayaan ee xigta, tixraac bayaankaagii ugu dambeeyay. Dulsaarka koontadan $ 3 bishii aan la qiimayn marka saxeexa koontadu ka yar yahay 18 ama 65 ama ka weyn oo ku salaysan taariikhda dhalashada ee faylka.
#6 - koontada bangiga carruurta ee PNC
The PNC kkoontada bangiga ee ID -ga waa mid siisa faa'iidooyin dhab ah carruurta iyo dhallinyarada.
Bangigu wuxuu u baahan yahay in qof kasta oo u baahan in loo diiwaangeliyo koontada carruurta waa inuu ka yar yahay 18 sano, lagana qaadi maayo lacag adeeg bille ah haddii milkiiluhu ku hayo koontada koontada celcelis ahaan $ 300 bishii.
Xisaabtu waxay la timaaddaa khibrad bangiyeed oo toos ah oo is -dhexgal ah, deebaaji aan xad lahayn, iyo dulsaar laga bilaabo $ 1.00.
#7 - koontada ardayga ee bangiga Mareykanka
Bangiga fadhigiisu yahay Minneapolis wuxuu leeyahay in ka badan 3,000 oo laamood oo ku yaal Galbeedka iyo Midwest marka lagu daro Florida, North Carolina, iyo Tennessee. Macaamiishu waxay kaloo booqan karaan in ka badan 5,300 ATM oo ku dhex jira shabakadda MoneyPass.
Bangiga weyn wuxuu qof walba u hayaa wax: kaararka hore iyo kaararka deynta, amaahda, iyo ikhtiyaaraadka dib -u -maalgelinta, iyo sidoo kale qalabka maalgelinta iyo maareynta maalka.
Bangigu wuxuu siiyaa dheefaha jeegga koontada ardayga dhallinyarada ka yar da'da 18 sano.
Koontadani waxay u oggolaanaysaa dhallinta inay lacag ku helaan ATM -yada meel walba ku dhow; mid ka mid ah oo aan wax lacag ah laga qaadin ilaa afarta markab ee ugu horreeya ee aan ka ahayn Bangiga Maraykanka ee ATM-ka.
XIDHIIDHKA: Sida Loo Maalgashado Suuqyada Saliidda Qaydhin leh ROI Sare | Tilmaan Fudud
Bangiga Mareykanka wuxuu oggol yahay in xisaabaadka lagu abuuro hab codsi onlayn ah.
#8 - Xisaabaadka hubinta BBVA ee dhalinyarada
BBVA waxay leedahay tan oo ku saabsan dhallinta koontada la fura iyaga. Waxay rumaysan yihiin in “Marka dhallintaadu wax ka baranayso maamulka lacagta iyo bangiyada, koontada jeeggu waa tallaabo weyn oo hore.
Koontada jeegga ayaa kaa caawin karta barashada dhallinta, hagaha waalidka, sida xisaabaadka bangigu u shaqeeyaan, sida loo isticmaalo aaladaha bangiyada ee internetka, iyo sida loo qoro jeeg.
Waxa kale oo ay ka caawin kartaa waalidiinta in ay bilaabaan wada -hadal ay la yeeshaan dhallintooda ku saabsan muhiimadda ay leedahay samaynta miisaaniyadda, maaraynta kharashaadka, iyo kaydinta lacagta. ”
Koontada jeegga dhalinta ee BBVA waxay bixisaa deebaajiga ugu yar ee furitaanka $ 25.
#9 - Xisaabaadka keydka carruurta ee Bank Of America
Tani koontada keydka carruurta by Bank of America waa mid loogu talagalay dhalinyarada iyo carruurta ka hooseysa 18. Waa koonto ay leeyihiin kuwa aan qaangaarin iyo waalidka laakiin kan yar ayaa weli heli kara lacag ka hor 18 sano jir.
Koontadu waxay leedahay deebaaji furitaan oo ugu yar oo ah $ 25 waxaana caymis ku jira FDIC ilaa inta ugu badan ee sharcigu oggol yahay.
Koontada keydka carruurta ee BOA waxay u beddeshaa koontada kaydka faa'iidada ee Bank of America marka ilmuhu gaaro 18 sano. Koontadani waxay leedahay dulsaar ah 0.05 %.
#10 - Koontada jeegga dugsiga sare ee Chase
Koontada jeegga ee dugsiga sare ee Chase waxaa loogu talagalay ardayda da'doodu u dhaxayso 13 ilaa 17 sano marka laga furayo koontada waalidkood/mas'uulka sida wada-lahaanshaha waana in koontadu ku xirnaataa koontada jeegga shakhsiyeed ee waalidka/mas'uulka.
Koontada waxaa loo sameeyay si ay uga caawiso waalidiinta inay baraan dhalintooda iyo carruurtooda lacagta iyagoo siinaya waalidka xakamaynta ay rabaan iyo carruurta xorriyadda ay u baahan yihiin inay bartaan.
"Chase" wuxuu ka diiwaangashan yahay Bangiga JPMorgan Chase, oo ah shirkad iska leh JPMorgan Chase & Co.
Maqaalkani kama wada hadlayo bangiyada oo dhan, maadaama ay taasi run ahaan caqli gal ahayn, laakiin gudaheeda waxaa ku jira tobanka ugu fiican ee caalamka laga aqoonsan yahay.
Xisaabta bangiga ugu fiican ee dhallinta ayaa sidoo kale noqon karta ta aad isticmaasho ama ta kugu xeeran.
Ka dib markaad akhrido maqaalkan, waa inaad awood u yeelatid inaad samayso go'aanno xog -ogaal ah oo ku saabsan xisaabaadka bangiga ee ugu fiican dhallinta.
Miyaan qori karaa jeeg naftayda? Hagaha fudud ee 2022
SIDA LACAGTA LOOGU SAMEEYO BILAASHA BILAASHKA: 30ka dariiqo ee ugu fiican sannadka 2022
Ma ogtahay inaad ka heli karto 4K Ultra HD TV si fiican loo dhisay oo qiimo jaban ah? waa!…
Toos Toos ah oo Sugaysa Macnaha Debaajiga iyo Sida ay U Shaqayso
Xawaaladda Tooska ah ee Tooska ah ee la sugayo waa xaallad ku rida dad badan oo adeegsadeeda jahawareer. A…